सबैले थाहा पाउनु जरुरी, यस्ता रहेछन् हिन्दू धर्मका आश्चर्यजनक २९ वटा रहस्य | Rajmarga
सबैले थाहा पाउनु जरुरी, यस्ता रहेछन् हिन्दू धर्मका आश्चर्यजनक २९ वटा रहस्य
ऋषि कश्यप र उनका पत्नीहरूका पुत्रहरूकाे रहस्य : के भनिन्छ भने सिंगाे पृथ्वी प्रारम्भिक कालमा एक द्वीप थियाे पछि याे दुर्य द्वीपमा विभाजन भयाे र कालान्तरमा सात द्वीपहरूमा परिणत भयाे। धार्मिक ग्रन्थहरूका अनुसार प्रारम्भिक कालमा सृष्टिकर्ता ब्रह्माले समुद्र र पृथ्वीमा विभिन्न किसिमका जीवहरकाे उत्पत्ति गरे। उत्पत्ति वा सृष्टिकाे यस कालखण्डमा उनले अाफ्ना कतिपय मानस पुत्रहरूलार्इ पनि जन्म दिए। तिनीहरूमध्ये एक थिए मरीची। ऋषि कश्यप ब्रह्माजीका मानस पुत्र मरीचीका विद्वान पुत्र हुन्।
उड़्ने र इच्छाधारी नाग : के मान्यता रहेकाे छ भने १०० वर्षभन्दा लामाे अायु हुँदाहुँदै पनि सर्पमा उड्ने शक्ति हुने गर्छ। सर्प कयाैँ प्रकारका हुन्छन्- मणिधारी, इच्‍छाधारी, उड्ने, एकफणा भएका देखि लिएर दसफणासम्म भएका सर्प, जसलार्इ शेषनाग भनिन्छ। नीलमणिधारी सर्पलार्इ सबभन्दा उत्तम मानिएकाे छ। इच्छाधारी नागका बारेमा के भनिन्छ भने त्याे नाग अाफ्नाे इच्छा अनुसार मानव, पशु वा अन्य कुनै पनि जीवकाे समान रूप धारण गर्न सक्छ।
के पारसमणि हुन्छ त ? मणि एक प्रकारकाे चम्किने पत्थर हो। मणिलार्इ हीराकाे श्रेणीमा राख्न सकिन्छ। मणि हुन्थ्याे याे पनि अाफैँमा एक रहस्यकाे रूपमा छ। जाेसँग मणि हुन्थ्याे त्यसले जे पनि गर्न सक्थ्याे। ज्ञातव्य छ, अश्वत्थामासँग मणि थियाे जसकाे प्रभावले उ शक्तिशाली र अमर भएकाे थियाे। रावणले कुबेरसँग चन्द्रकान्त नामकाे मणि खाेसेकाे थियाे।
एक अन्य खोज : भारतीय वैज्ञानिकहरूले हिमालयकाे उपल्लाे इलाकामा एक अनोठाै बिरूवा खोजी गरेका छन्। वैज्ञानिकहरूकाे दाबी के छ भने याे बिरूवा एक यस्ताे औषधिकाे रूपमा काम अाउँछ, जसले हाम्राे इम्यून सिस्टमलार्इ रेग्युलेट गर्दछ। यसले हाम्राे शरीरलार्इ पर्वतीय परिस्थिति अनुरूप ढाल्नमा मद्दत गर्दछ र हामीलार्इ रेडियो एक्टिभिटीबाट पनि बचाउँछ।
के कल्पवृक्ष अहिले पनि पाइन्छ त ? : वेद र पुराणहरूमा कल्पवृक्षकाे उल्लेख गरिएकाे छ। कल्पवृक्ष स्वर्गकाे एक विशेष वृक्ष हाे। पौराणिक धर्मग्रन्थहरू र हिन्दू मान्यताहरूका अनुसार के मानिन्छ भने यस वृक्षकाे मुनि बसेर व्यक्ति जे पनि इच्छा गर्दछ, त्याे इचछा पूर्ण हुन जान्छ । किनभने यस वृक्षमा अपार सकारात्मक ऊर्जाकाे भण्डार हुन्छ। याे वृक्ष समुद्र मन्थनबाट निस्केकाे हाे। समुद्र मन्थनबाट प्राप्त भएकाे याे वृक्ष देवराज इन्द्रलार्इ दिइएकाे थियाे र इन्द्रले यसकाे स्थापना ‘सुरकानन वन’ (हिमालयकाे उत्तरमा) मा गरेका थिए।
एक कल्पकाे आयु : कल्पवृक्षकाे अर्थ हुन्छ, जुन एक कल्पसम्म जीवित हाेस्। तर अब सवाल के उठ्छ भने के साँच्चै यस्ताे कुनै वृक्ष थियाे वा छ त ? यदि थियाे भने आज पनि त्याे हुनुपर्ने किनभने त्याे त एक कल्पसम्म जीवित रहने वृक्ष हाे। यदि यस्ता कुनै वृक्ष छ भने त्याे कस्ताे हुन्छ ? र यसका के फाइदाहरू छन् ? यद्यपि केही मानिसहरू के मान्छन् भने अपरिजातकाे वृक्षलार्इ नै कल्पवृक्ष मानिन्छ, तर अधिकतर याे तथ्यसँग सहमत छैनन्।
के कामधेनु गार्इ हुन्छ त ? : कामधेनु गार्इकाे उत्पत्ति पनि समुद्र मन्थनबाटै भएकाे थियाे । याे एक चमत्कारी गार्इ हुने गर्थ्याे जसकाे दर्शन मात्रैले पनि सबै प्रकारका दु:ख-दर्द दूर हुन जान्थ्याे। दैवीय शक्तिहरूबाट सम्पन्न याे गार्इ जसकाे साथमा हुन्थ्याे उसलार्इ चमत्कारिक लाभ मिल्दथ्याे। यस गार्इकाे दूध अमृत समान मानिन्थ्याे।
३३ कोटि देवता : हिन्दू धर्मअनुसार गार्इमा ३३ कोटि देवी-देवता निवास गर्छन्। कोटिकाे अर्थ ‘करोड’ हाेइन, ‘प्रकार’ हो। यसकाे तात्पर्य गार्इमा ३३ प्रकारका देवता निवास गर्दछन्। यी देवता यस प्रकार छन्- १२ आदित्य, ८ वसु, ११ रुद्र र २ अश्‍विन कुमार। यी सबै मिलाएर कुल ३३ हुन्छन्।
गार्इकाे सूर्यकेतु नाडी : गार्इकाे पीठमा करङकाे हाडमा अवस्थित सूर्यकेतु स्नायु हानिकारक विकिरणलार्इ रोकेर वातावरणलार्इ स्वच्छ बनाउँछ। याे पर्यावरणका लागि लाभदायक छ। अर्कातिर, सूर्यकेतु नाडी सूर्यकाे सम्पर्कमा आउँदा यह स्वर्णकाे उत्पादन गर्दछ। गार्इकाे शरीरबाट उत्पन्न याे सुन गार्इकाे दूध, मूत्र तथा गोबरमा पाइन्छ। याे स्वर्ण दूध वा मूत्र खानाले शरीरमा पुग्दछ र गोबरका माध्यमबाट खेतहरूमा पनि पुग्छ। कतिपय रोगीहरूलार्इ स्वर्ण भस्म दिइन्छ।
पञ्चगव्य : पञ्चगव्य कतिपय रोगहरूमा लाभदायक हुन्छ। पञ्चगव्यकाे निर्माण गार्इकाे दूध, दही, घिउ, मूत्र, गोबरबाट गरिन्छ। पञ्चगव्यकाे सेवनले शरीरकाे रोग निरोधक क्षमतालार्इ बढाएर रोगहरूलार्इ दूर गरिन्छ। यस्ताे कुनै रोग छैन जसकाे उपचार पंचगव्यबाट गर्न नसकियाेस्।
देवस्थान : प्राचीनकालमा हिमालयमा नै देवता बस्दथे। यहीं ब्रह्मा, विष्णु र शिवकाे स्थान थियाे र यहाँ नै नंदनकानन वनमा इन्द्रकाे राज्य थियाे। इन्द्रकाे राज्यसँगै गन्धर्वहरू र यक्षहरूकाे पनि राज्य थियाे। स्वर्गकाे स्थिति २ स्थानमा बताइएकाे- पहिलाे हिमालयमा अर्काे कैलाश पर्वतकाे कयाैँ योजन माथि। यहाँ नै मानसरोवर छ र यसै हिमालयमा अमरनाथकाे गुफा छ।
अन्य रहस्यमय कुराहरू : हिमालयमा नै यति जस्ता कतिपय रहस्यमय प्राणी बस्छन्। यसका अलावा यहाँ चमत्कारिक र दुर्लभ जडिबुटिहरू पनि पाइन्छ। भारत र चीनका सेनाले हिमालय क्षेत्रमा नै एलियन र युएफओ देखेकाे दाबी गरेका छन्। हिमालयमा नै एक रूपकुण्ड खाेला छ। यसकाे तटमा मानव कंकाल पाइएकाे छ। पछिल्ला कयाैँ वर्षदेखि भारतीय र युरोपेली वैज्ञानिकहरूका विभिन्न समूहहरूले यस रहस्यलार्इ सुल्झाउन धेरै प्रयास गरे, तर असफल भए ।
अमृत कलश : समुद्र मन्थनका क्रममा के कुनै यस्ताे रस निस्केकाे थियाे जसलार्इ पिएर देवताहरूले अमरत्व प्राप्त गरेका थिए ? यदि समुद्रबाट यस्ताे कुनै रस त्यतिबेला निस्केकाे थियाे भने त्याे अाज चाहिँ किन निस्कदैँन ? जरूरी छ र समुद्रबाट नै निक्लेकाे हाेस् ? अमृत कलशका लागि देव र दैत्यहरूका बीच भयंकर युद्ध भएकाे थियाे। वास्तवमा अमृत निस्कनु एक रहस्य नै हाे। यद्यपि वैज्ञानिक यस्ताे अाैषधि बनाउन काेशिश गरिरहेका छन् जसकाे सेवनले मानिस लामाे समयसम्म तरूण बन्न सकाेस् ।
अमर हुने रहस्य : अमर काे हुन चाहन्न र ? समुद्र मन्थनमा अमृत निस्क्याे। यसलार्इ प्राप्त गर्नका लागि देवताहरूले दानवहरूसँग साथ छल गरे। देवता अमर भए। यसकाे तात्पर्य के हाे भने के समुद्रमा यस्ताे केही चीज छ जसबाट अमृत निस्काेस् ? त के आज पनि निस्किन्छ त ? अहिले अधिकतम १०० वर्षकाे जीवनमा त अनेकानेक रोग, कष्ट, संताप र झंझट छन् भने अमरता प्राप्त गर्दा के हाेला ? १०० वर्षपछि वैराग्य प्राप्त गरी व्यक्ति हिमालय जाने जाला। त्यहाँ गएर उसले के गर्ला ? बोर भयाे भने फेरि संसारमा आएर बस्ला। हाे, यही सिलसिला चलिरहला।
के गरिरहेका छन् वैज्ञानिक ? : वैज्ञानिक अमरताका रहस्यहरूबाट पर्दा हटाउने दिशामा तीव्र गतिमा अगाडि बढिरहेका छन् । बढ्दाे उमेरकाे प्रभावलार्इ रोक्नका लागि धेरै प्रकारका अाैषधिहरू र सर्जरीकाे विकास भइरहेकाे छ। अहिले यसमा योग र आयुर्वेदलार्इ पनि उत्तिकै महत्व दिन थालिएकाे छ। ढल्कँदाे उमेरकाे प्रभाव रोक्न विषयमा आयोजित एक व्यापक सर्भेमा के पत्ता लाग्याे भने उमेर वाघटाउनेली ‘गोली’ बनाउन संभव छ। रूसकाे साइबेरियाका जंगलहरूमा एक औषधि पाइन्छ जसलार्इ जिंगसिंग भनिन्छ। चीनका मानिसहरू यसलार्इ धेरै प्रयाेग गरी लामाे समयसम्म युवा बनिरहन्छन्।
‘जर्नल नेचर’ मा प्रकाशित ‘पजल, प्रमिस एण्ड क्योर अफ एजिङ’ नामक रिभ्युमा के भनिएकाे छ भने आउँदा दशकहरूमा मानवकाे जीवनकाल बढाउन सकिने प्रशस्त सम्भावनाहरू बढेर गएका छन्। अखबार ‘डेली टेलिग्राफ’ का अनुसार एज रिसर्चका बारेमा बक इन्स्टीट्यूट, क्यालिफाेर्नियाका डक्टर जुडिथ क्यान्पिसीले के भनेका छन् भने सिम्पल अर्गनिज्मकाे बारेमा मौजुदा नतिजाहरूलार्इ हेर्ने हाे भने मानिसकाे जीवनकाललार्इ बढाउन घटाउन सकिन्छ, यसमा कुनै शंका छैन। पहिले पनि कतिपय स्टडिजमा के पाइसकिएकाे छ भने यदि बढ्दाे उमेरकाे असरलार्इ उजागर गर्ने जिनेटिक प्रोसेसलार्इ बन्द गरिदिने हाे भने मानव सधैंभरि तरूण बन्न सक्छ। जर्नल सेलकाे जुलाइकाे अंकमा प्रकाशित एक रिसर्च रिपोर्टमा के भनिएकाे छ भने बढ्दाे उमेरकाे प्रभाव जिनेटिक प्लानकाे हिस्सा हुन सक्छ, शारीरिक गतिविधिहरूकाे नतिजा हाेइन। खोज र रिसर्च जारी छ…। (एजेन्सी)
महान योद्धा बर्बरीक र घटोत्कच : बर्बरीक महान पाण्डव भीमका पुत्र घटोत्कच र नागकन्या अहिलवतीका छाेरा थिए। कतै-कतै मुर दैत्यकी पुत्री ‘कामकण्टकटा’ का उदरबाट पनि यिनकाे जन्म भएकाे कुरा उल्लेख गरिएकाे छ। बर्बरीक र घटोत्कचका सम्बन्धमा के भनिन्छ भने यी दुबै नै विशालकाय मानव थिए। घटोत्कचले कौरव सेनामा हाहाकार मच्चाएका थिए। अन्ततः कर्णले अर्जुनका लागि साँचिराखेकाे अस्त्र प्रयाेग गरी घटाेत्कचलार्इ मारेका थिए।
द्वारिका नगर : मथुराबाट निस्केर भगवान कृष्णले द्वारिका क्षेत्रमा नै पहिलेदेखि स्थापित खण्डहर भरइसकेकाे नगर क्षेत्रमा एक नयाँ नगरकाे स्थापना गरेका थिए। यहाँनेर हामीले के बझ्नुपर्छ भने भगवान कृष्णले अाफ्ना पूर्वजहरूकाे भूमिलार्इ पुनः बस्न लायक बनाएका थिए। प्राचीन इतिहासकाे खोजी गृने इतिहासकारहरूका अनुसार द्वारिका विश्‍वकाे सबभन्दा रहस्यमय सहर हाे। यस सहरमा अझै पनि शोधकार्य जारी छ।
कहाँबाट आयाे सुदर्शन चक्र ? के भनिन्छ भने सुदर्शन चक्र एक यस्ताे अचूक अस्त्र थियाे जसलार्इ छोडेपछि याे लक्ष्यलार्इ पछ्याउँथ्याे र उसकाे काम तमाम गरेर मात्र पुनः छोडिएकाे स्थानमा आउँदथ्याे। यस चक्र भगवान विष्णुकाे तर्जनी अंगुली वा चाेरी अाैँलामा घुमिरहेकाे बताइन्छ। सबभन्दा पहिले याे चक्र उनीसँग थियाे ।
वानर प्रजाति : के साँच्चै रामायण कालमा बताइए अनुसार जामवन्त एक भालु थिए र हनुमानजी एक वानर ? यद्यपि आज पनि याे रहस्य यथावत छ। यदि बजरंग बली वानर थिएनन् भने उनलार्इ रामायण र रामचरित मानसमा कपि, वानर, शाखामृग, प्लवंगम, लोमश र पुच्छधारी भनेर पुकारिदैनथ्याे। लंकादहनकाे वर्णन पनि पुच्छरसँग जाेडिएकाे हुँदैनथ्याे।
के हजाराैँ वर्षसम्म जीवित रहन सकिन्छ त ? पौराणिक र संस्कृत ग्रन्थहरूका अनुसार भारतवर्षमा यस्ता कयाैँ मानिसहरू छन्, जो हजाराैँ वर्षदेखि ‍जीवित छन्। हिमालयमा आज पनि यस्ता कतिपय ऋषिमुनिहरू छन् जसकाे आयु लगभग ६०० वर्षभन्दा बढी बताइन्छ ।
कौरवहरूकाे जन्म एक रहस्य : कौरवहरूलार्इ सबैले चिन्दछन् । धृतराष्ट्र र गान्धारीका ९९ जना पुत्र र १ पुत्री थिइन् । यिनीहरूलार्इ नै कौरव भनिन्थ्याे। कुरु वंशका भएकाे कारणले यी कौरव कहलाए। सबै कौरवमध्ये दुर्योधन सबभन्दा जेष्ठ थियाे। गान्धारी जब गर्भवती भएकी थिइन्, तब धृतराष्ट्रले एक दासीसँग सहवास गरेका थिए । जसकाे कारणले युयुत्सु नामक पुत्रकाे जन्म भयाे। यसरी कौरव १०० जना भए। युयुत्सु ऐन माैकामा कौरवहरूकाे सेनालार्इ छोडेर पाण्डवहरूकाे सेनामा सम्मिलित भएकाे थियाे ।
के इच्छामृत्यु प्राप्त गर्न सकिन्छ ? भीष्म पितामहका बारेमा के भनिन्छ भने उनलार्इ इच्छामृत्युकाे वरदान प्राप्त भएकाे थियाे।
पुराणहरूका अनुसार ब्रह्माजीबाट अत्रि, अत्रिबाट चन्द्रमा, चन्द्रमाबाट बुध र बुधबाट इलानन्दन पुरुरवाकाे जन्म भयाे। पुरुरवाबाट आयु, आयुबाट राजा नहुष र नहुषबाट ययाति उत्पन्न भए। ययातिबाट पुरु भए। पुरुकाे वंशमा भरत र भरतकाे कुलमा राजा कुरु भए। कुरुकाे वंशमा अगाडि गएर राजा प्रतीप भए जसका अर्का पुत्र थिए शान्तनु। शान्तनुका दाजु सानैमा बितेका थिए । शान्तनुका गंगाबाट देवव्रत (भीष्म) जन्मेका थिए। भीष्मले ब्रह्मचर्यकाे प्रतिज्ञा गरेका थिए । त्यसैले याे वंश अगाडि बढ्न सकेन। भीष्म अन्तिम कौरव थिए।
सिन्धु, सरस्वती, गंगा, नर्मदा र ब्रह्मपुत्र : उक्त ५ नदीहरूलार्इ भारत र विशेष गरी हिन्दू धर्ममा असाध्यै महत्वपूर्ण मानिन्छ। उक्त पाँच नदीहरूकाे जल एक-अर्काका भन्दा अलग छन् तर तिनीहरूमध्ये नर्मदा नदीलार्इ छोडेर बाँकी नदीहरू हिमालयकाे एकै स्थानबाट निस्कन्छन्। नर्मदा एकमात्र यस्ताे नदी हाे, जुन सबै नदीहरूकाे अपेक्षा विपरीत दिशामा बग्दछ र यसलार्इ पातालकाे नदी भनिन्छ।
सरस्वती : सरस्वती नदी त अहिले अाएर भाैगर्भिक हलचलका कारणले अस्तित्व लुप्त भयाे तर आज पनि यसले राजस्थान र हरियाणाका केही भूभागमा अाफ्नाे अस्तित्व रहेकाे देखाउँछ। भनिन्छ, लगभग १८ इसापूर्व यस नदीकाे अस्तित्व मेटियाे। यस नदीकाे किनारामा नै वेदका ऋ‍चाहरूकाे जन्म भयाे र भगवान ब्रह्माले अाफ्ना कतिपय महत्वपूर्ण यज्ञ यसै नदीकाे किनारमा सम्पन्न गरेका थिए। प्राचीन सभ्यताहरूकाे जननी सरस्वती नदी आज पनि एक रहस्य हाे, खास गरी ती मानिसहरूका लागि, जो जानी-बुझीकन पनि यसकाे अस्तित्व स्वीकारना चाहदैँनन्।
गंगा नदी : याे एक रहस्यकै रूपमा छ, आखिर गंगा नदीकाे पानी किन सड्दैन त? यद्यपि वैज्ञानिकहरू के भन्छन् भने यस नदीमा ३ प्रकारका यस्ता बैक्टीरिया पाइन्छ, जसले अन्य सबै खालका बैक्टीरियाहरूलार्इ खाइदिन्छन् । त्यसैकाे कारणले यसकाे पानी सड्दैन। मान्यता अनुसार याे भारतकाे सबभन्दा पवित्र र रहस्यमय नदी हाे। यसलार्इ रामका वंशज राजा भगीरथले स्वर्गबाट पृथ्वीमा ल्याएका थिए।
गरूड वाहन : गरूडकाे हिन्दू धर्ममा महत्वपूर्ण स्थान छ। यािनी पक्षीहरूका राजा र भगवान विष्णुका वाहन हुन्। भगवान गरूडलार्इ कश्यप ऋषि र विनीताका पुत्र भनिएकाे छ। विनीता दक्ष कन्या थिइन्। गरूडका दाजुकाे नाम अरुण हाे, जो भगवान सूर्यकाे रथका सारथी हुन्। पक्षीराज गरूडलार्इ जीव विज्ञानमा लेपटोटाइल्स जावानिकस भनिन्छ। याे इन्टरनेशनल यूनियन कन्जरभेशन अफ नेचरकाे रेड लिस्ट याने विलुप्तप्राय पक्षीकाे श्रेणीमा समावेश छ। पंचतंत्रमा गरूडका कयाैँ कहानीहरू छन्।
के साँच्चै कुनै सुन वा स्वर्ण बनाउने विधि छ ? भनिन्छ, प्राचीन भारतवासीहरू स्वर्ण बनाउने विधि जान्दथे। उनीहरू पारद आदिलार्इ कुनै विशेष मिश्रणमा मिसाएर स्वर्ण बनाउँथे, तर के याे सत्य हाे ? याे आज पनि एक रहस्य नै हाे। भन्न त के पनि भनिन्छ भने हिमालयमा पारस नामकाे एक सेताे पत्थर पाइन्छ जसलार्इ यदि फलाममा छुवाइदिने हाे भने त्याे फलाम सुनमा परिणत हुन जान्छ। पाराे, जडी- वनस्पतिहर र रसायनहरूद्वारा सुन बनाउने विधिकाे बारेमा कतिपय ग्रन्थहरूमा उल्लेख गरिएकाे पाइन्छ।
वर्तमान युगमा के भनिन्छ भने पंजाबका कृष्‍णपालजी शर्मालार्इ पारदबाट सुन बनाउने विधि थाहा थियाे। यसकाे उल्लेख ६ नाेभेम्बर सन् १९८३ काे ‘साप्ताहिक हिन्दुस्तान’ मा पाइन्छ। पत्रिकाका अनुसार सन् १९४२ मा पंजाबका कृष्णपाल शर्माले ऋषिकेशमा पाराेद्वारा लगभग १०० तोला सुन बनाएर राखिदिएका थिए। भनिन्छ, त्यस समयमा त्यहाँ महात्मा गान्धी, उनका सचिव महादेव भाई देसाई र युगल किशोर बिडला आदि उपस्थित भएका थिए। यस घटनाकाे वर्णन बिडला मन्दिरमा राखिएकाे शिलालेखबाट पनि पाइन्छ। यद्यपि यस कुरामा कत्तिकाे सत्यता छ, त्याे हामी जान्दैनाैँ। (एजेन्सी)
के यी चमत्कारिक जडी-बुटिहरू हुन्छन् ? सिद्धि दिने जडी-बुटी : गुलतुरा (दिव्यताका लागि ), तापसद्रुम (भूतादि ग्रह निवारक), शल (दरिद्रतानाशक), भोजपत्र (ग्रह बाधाहरू निवारक), विष्णुकान्ता (शत्रुनाशक), मंगल्य (तान्त्रिक क्रियानाशक), गुल्बास (दिव्यता प्रदानकर्ता), जीवक (ऐश्वर्यदायिनी), गोरोचन (वशीकरण), गुग्गल (चामण्डु सिद्धि), अगस्त (पितृदोषनाशक), अपमार्ग (बाजीकरण), आंधीझाडा (भस्मक रोग भाेक-प्यासनाशक), श्वेत अपराजिता (दरिद्रानाशक), हत्था जोडी (वशीकरण), समोवल्ली (मृत्यनाशक), शिलाजीत (नपुंसकतानाशक), अश्‍वगन्धा (वीर्यवर्धक) आदि।
तिब्बतकाे यमद्वार : प्राचीनकालमा तिब्बतलार्इ त्रिविष्टप भनिन्थ्याे। याे भारतवर्षकाे नै एक हिस्सा थियाे। तिब्बतमा दारचेनबाट ३० मिनेटकाे दूरीमा छ याे यमकाे द्वार।
यमकाे द्वार पवित्र कैलाश पर्वतकाे बाटाेमा पर्दछ। यसकाे परिक्रमा गरेपछि मात्रै कैलाश यात्रा सुरू भएकाे मानिन्छ। हिन्दू मान्यताका अनुसार यसलार्इ मृत्युका देवता यमराजकाे घरकाे प्रवेश द्वार मानिएकाे छ। याे कैलाश पर्वतकाे परिक्रमा यात्राकाे सुरूवाती प्वाइन्टमा छ। तिब्बतीहरू यसलार्इ चोरटेन कांग नग्यी काे नामबाट चिन्छन् जसकाे अर्थ हाे- दुर्इ गाेडा भएकाे स्तूप।
कतिसम्म भनिन्छ भने यहाँ रातमा बस्ने मानिस जीवित रहँदैन। यस्ता कतिपय घटनाहरू भइ पनि सकेका छन्, तर यसका पछाडिका कारणहरूकाे रहस्याेद्घाटन अझैसम्म भएकाे छैन। साथै याे मन्दिरमा द्वार कसले र कहिले बनायाे ? यसकाे कुनै प्रमाण भेटिएकाे छैा। धेरै शोध भए, तर कुनै परिणाम हात लागेन।
भनिन्छ, द्वारकाे यतापट्टि संसार छ भने अर्कातिर मोक्षधाम छ। बौद्ध लामाहरू यहाँ आएर प्राणान्त हुनुलार्इ मोक्ष-प्राप्ति मान्दछन् । त्यसैले बिरामी लामा अन्तिम इच्छास्वरूप यहाँ अाएर प्राण त्याग गर्दछन्।
सम्राट अशोकका ९ रहस्यमय रत्न : ९ रत्न राख्ने परम्पराकाे सुरुवात सम्राट अशोक र राजा विक्रमादित्यबाट भएकाे मानिन्छ। उनीहरूकाे सिकाे गर्दै पछिका राजाहरूले पनियस परम्परालार्इ निरन्तरता दिए। अकबरले अाफ्नाे दरबारमा ९ रत्नहरूकाे नियुक्ति गरेका थिए। केही मानिसहरू के भन्छन् भने अशोकसँग यस्ता ९ जना थिए, जसले उनलार्इ राजकाजमा निर्देश गर्थे । तिनीहरूकाे निर्देश र सहयोगकाे बलमा नै अशोकले महान कार्यहरूलार्इ सम्पन्न गर्थे। यी ९ जना काे थिए यसकाे रहस्य आज पनि यथावत छ। के तिनीहरू मनुष्य थिए वा देवता थिए?
के रावणका दस शिर थिए? साँच्चै भन्ने हाे भने काेही कसैकाे ३, ४ वा १० शिर हुनु भनेकाे अाफैँमा एक रहस्यमय कुरा हाे। भगवान दत्तात्रयका ३, ब्रह्माजीका ४ र रावणका १० शिर थिए। ‘रावण’… दुनियाँमा यस नामकाे अर्काे कुनै व्यक्ति छैन। राम त धेरै पाइन्छन् तर रावण एक मात्र भेटिन्छ। रावण त केवल रावण हाे। राजाधिराज लंकाधिपति महाराज रावणलार्इ ‘दशानन’ पनि भनिन्छ। भनिन्छ रावण लंकाकाे तमिल राजा थियाे।
जैन शास्त्रहरूमा के उल्लेख गरिएकाे छ भने रावणकाे घाँटीमा ठूला-ठूला गोलाकार ९ मणिहरू हुन्थे। उक्त ९ मणिहरूमा उसकाे शिर देखिन्थ्याे जसकाे कारण उसकाे १० शिर भएकाे भ्रम हुन्थ्याे।
यद्यपि धेरैजसाे विद्वान र पुराणहरूका अनुसार त सत्य के हाे भने रावण एक मायावी व्यक्ति थियाे, जो अाफ्नाे मायाद्वारा १० शिर भएकाे भ्रम पैदा गर्न सक्थ्याे। उसकाे मायावी शक्ति र जादूका चर्चा जगप्रसिद्ध थिए।
आत्मा वा प्राण अलग अलग हुनु : त्यसाे त के भनिन्छ भने हाम्राे आत्माकाे वास दुर्इ अाँखीभुर्इंकाे माझमा रहेकाे भृकुटीमा हुन्छ। तर हामीले पुराणहरू र अन्य ग्रन्थहरूमा के पढेका छाैँ भने केही मानिसहरू, पशुहरू वा पक्षीहरूकाे प्राण वा जीव अन्य कतै हुन्थ्याे, जस्ताे कुनै राक्षसकाे प्राण सुगामा थियाे। त्यसैले जबसम्म सुगालार्इ मारिँदेन थियाे त्यतिबेलासम्म राक्षसलार्इ मार्न असंभव थियाे। त्यसै गरी रावणकाे प्राण उसकाे नाभिमा थियाे। के यस्ताे पनि संभव हुन सक्छ?
यति : बिगफुट मानव जातिकाे विनाशकाे प्रतीक्षा गरिरहेकाे छ, किनभने त्यही नै हाे धरतीकाे वास्तविक वा असली प्राकृतिक प्रजाति। आजकाे मानव त ‘स्टार प्राेडक्ट’ हुन् जबकि बिगफुटबाट मानवले धरतीलार्इ खाेसे र उनीहरूलार्इ लुक्नलार्इ बाध्य बनाइदियाे ? आधुनिक जीव वैज्ञानिक त यही मान्दछन्। पूरा विश्वमा यिनीहरूलार्इ अलग-अलग नामबाट चिनिन्छ। तिब्बत र नेपालमा यिनीहरूलार्इ ‘यती’ भनिन्छ भने अस्ट्रेलियामा ‘योवी’ काे नामबाट चिनिन्छ। भारतमा यसलार्इ ‘यति’ भनिन्छ।
हावाखोरी वा अन्न र पानी विनाकाे जीवनकाे रहस्य के हाे ? : आज पनि भारतकाे धरतीमा यस्ता कतिपय मानिसहरू छन् जसले कयाैँ वर्षदेखि भोजन गरेका छैनन, तर उनीहरू सूर्य योगकााे बलमा आज पनि स्वस्थ र जिउँदा छन्। भाेक र प्यासबाट मुक्त केवल सूर्यकाे प्रकाशकाे बलमा यिनीहरू जिउँदा छन्।
वेबदुनियाबाट नेपालीमा अनुवाद
Previous post: भविष्य बताउने नाममा महिला बलात्कार गर्ने तिवारी प्रहरीको फन्दामा
Next post: के युवतीहरु कम उमेरका युवकसँग विवाह गर्दा बढी खुसी हुन्छन् ?यस्तो रहेछ वैज्ञानिक तथ्य